Top 5 Most Beautiful Cities In Ethiopia
November 16, 2015 by Kelly Davies 4 Comments
Ethiopia is located in eastern Africa, west of Somalia, with a population of well over 100 million people and speaks about ninety languages. Ethiopia is the second most populous country in African continent. Ethiopia has the most UNESCO World Heritage Sites in Africa, and some of their cities are beauty to behold. These are the top cities you will like to visit whenever you … [Read more...] about Top 5 Most Beautiful Cities In Ethiopia
September 8, 2014 by Kelly Davies Leave a Comment
Ethiopia is strategically located in the horn of Africa with a population of about 57 million. Its proximity to the middle East and Europe, together with its access to the major ports of the region, enhance its international trade. Covering an area of approximately 1.14 million square kilometers (444 square miles) Ethiopia is bordered by the Sudan on the west, Somalia and … [Read more...] about How To Start a Business In Ethiopia